Umbiko Wokuguqulwa Kwefomu ka-2014: Isilinganiso kanye Nokuthuthukisa Ukuguqulwa Kwamafomu Wakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, i-2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, i-2014 Douglas Karr
Besingabangani nabalandeli (nezinkampani eziphethwe) I-Formstack selokhu kwaqalwa lolu shicilelo. Kukhona ingcebo yolwazi enkampanini futhi bayaqhubeka nokukhathalela amakhasimende abo futhi babavezele imiphumela emihle. Basanda kukhipha okutholakele okuhle ngokumangazayo ngenkathi beshaya futhi behlaziya ukuguqulwa kumakhasimende angaphezu kwe-400,000 nezigidi zabo zokuhanjiswa kwefomu.
Ngemininingwane ephelele, landaI-Formstack 's Umbiko Wokuguqulwa Kwefomu ka-2014. Umbiko ukuhlanganiswa kwemininingwane efaka imininingwane emayelana nokuthi yini eyenza abasebenzisi bakho bagcwalise amafomu akho. Kusuka kubude befomu elilungile kuye kokuhamba phambili uhambise ukopisha inkinobho oyisebenzisayo, siyethemba ukuthi ungayisebenzisa le datha ukwenza ifomu lakho libe elinokungenisa okuhle ngangokunokwenzeka futhi uliphakamise lapho kukhona khona amakhasimende akho nemikhombandlela yakho.
Amagama angukhiye ongawasebenzisa, izikhuthazo ongazinikeza, amazinga wokuguqula aphakathi, inani lezinkambu zefomu, nokusetshenziswa kwezenhlalo nezamaselula konke kuthinta ikhono lakho lokuthwebula ukuguqulwa kumafomu akho. Amabhizinisi nabathengi bacwila ezicelweni zolwazi, ngakho-ke ikhono lokwandisa amafomu akho libalulekile ukuze ukwazi ukukhothoza ubuhlakani obudingayo ukusiza amakhasimende noma ukuguqulwa okudingayo ukuze usebenze ibhizinisi lakho! Nakhu ukubuka kuqala kwamanye amamethrikhi abalulekile atholakele embikweni
Tags: Umbiko Wokuguqulwa Kwefomu ka-2014owenza kahle kakhuluamagama enkinobhoukuguqulwa kokuhlelwaukuguqulwaukuguqulaizinkambu zefomuukuhanjiswa kwefomuamafomuformstackinkinobho yokuhambisaamafomu ewebhu